Omunye wabaholi emakethe e izimonyo ephulukisa, akungabazeki, iyinkampani French "Avenue". Inkampani enomlando omude uye wakwazi bahlonishwe nokuduma emhlabeni sibonga emhlabeni ngokuyinhloko umqondo walo izinga. iminyaka engaphezu kwamakhulu amabili, "i-Ebeni Ezeri" esiza abantu abanezifo isikhumba kanye isikhumba ebucayi, futhi esekelwe yokwakheka imikhiqizo uphathwa amanzi ezishisayo. "Sikalfat" - ukhilimu, okuyinto ingenye imikhiqizo ethandwa kakhulu inkampani. It ihlose ngoba alimele ebucayi ukunakekelwa kwesikhumba.
Kubalulekile ukuqonda ukuthi luhlobo akuyona yezimonyo nje, futhi umkhiqizo kwezokwelapha. Cream "Sikalfat" ibekwe njenge-agent ukuphulukiswa. Amandla ayo elwa namagciwane enze kube nokwenzeka ukuba usebenzise ngokuphulukisa izindawo ezilimele kwesikhumba. Isici esiphawulekayo lokhu izidakamizwa ukuthi kufanelekile ukusetshenziswa cishe kunoma iyiphi indawo isikhumba, kuhlanganise ubuso. Ngenxa ngezithako zawo futhi ifomula eziyingqayizivele "i-Ebeni Ezeri" lenkampani, "Sikalfat" ngokulinganayo kahle yokubhekana nezinkinga isikhumba kokubili wengane, kanye omdala. Kulokhu, ukhilimu kuphephe ngokuphelele, ngisho abanikazi isikhumba ebucayi kakhulu.
Nge inkampani ifomula esiyingqayizivele "Avenue" ungase ubeke okhilimu yabo ayelapha. Ukukhiqiza umkhiqizo esekelwe amanzi ezishisayo, the beauticians French bakwazi ukuqamba umuthi ongaqeda hhayi kuphela inkinga kodwa futhi nezimbangela zayo. Futhi, imikhiqizo wale nkampani has a izinto Hypo-allergenic ukubunjwa yayo, esiza ukuvimbela ukuqubuka kubangelwa, isibonelo, i-njengemithi yokungezwani komzimba nokuthile ukudla.
Uhlu izinkomba ukusetshenziswa kwalo mkhiqizo, amenze ukhilimu iyingqayizivele ngempela. "I-Ebeni Ezeri" (inkampani) ulinakile ngenxa ezihlukahlukene izici ewusizo ukuthi bayakuvumela ukuba usebenzise ithuluzi for ekwelapheni izinkinga eziningi isikhumba. Kukuziphi izimo lapho kufanele afune usizo lomuthi? "Sikalfat" (ukhilimu) isetshenziswa kulezi zimo ezilandelayo:
Lapho izidingo ezikhethekile isikhumba ebucayi, uthambekela ukucasuka.
Lapho kukhona umonakalo noma ukwephula ubuqotho isikhumba, kungakhathaliseki nemihuzuko elula noma imihuzuko futhi umphumela ngokuhlaziya kwesikhumba.
Waba yini umphumela wesibindi elangeni, isibonelo, ishisa.
Cream ukugcina isikhumba zisesimweni esihle endabeni nezifo ezingamahlala khona.
Ukwakheka imifantu kunoma iyiphi ezingxenyeni zesikhumba ezithintekayo, kuhlanganise izindebe.
Ukucasuka ngenxa i bite kwezinambuzane.
I enqabayo isikhumba asabela ngayo kokungenela yezimonyo, isibonelo, ngemva ukuhlanza ubuso.
Esimweni lapho izingane inabukeni dermatitis.
Uthuthukisa ukuphulukiswa esasizosheshisa babugcwele izisihla kwakhiwa ngenxa ukuhlinzwa.
Kususelwa zonke zimo ezingenhla lapho kutuswa ukusebenzisa "Sikalfat" (ukhilimu), ungakhetha eziningi izakhiwo ewusizo emimoya lo mkhiqizo. Phakathi kwabo:
Ukuphulukisa izindawo ezilimele kwesikhumba.
I-ejenti elwa namagciwane.
Umthelela umswakama isikhumba esomile.
A aduduzayo isikhumba, sensitive esicasulayo.
Isakhi esiyinhloko lo mkhiqizo amanzi ezishisayo, okuyinto ngenkuthalo ukungezwa yonke imikhiqizo "i-Ebeni Ezeri" lenkampani. "Sikalfat" ukweleta impahla yayo anti-inflammatory futhi oluthulayo khona ukubunjwa yayo yamanzi ayegcwele namaminerali. Amanye amalungu lokhu ukhilimu izinto yilezi:
Ukuba khona zinc kanye ithusi ukwakheka kwandisa izakhiwo elwa namagciwane, okuhlanganiswayo kule ukhilimu. "I-Ebeni Ezeri" (inkampani) waqiniseka ukuthi umkhiqizo wabo, ukuhlanzwa endaweni ezilimele isikhumba kusuka amagciwane ayingozi, avimbele ukuvela kungenzeka ukutheleleka.
Sucralfate yena, kuyinto ndaba ebalulekile, okuyinto unomthwalo Ukuvikelwa wesabelo lilimele. Kuyinto lesi sici ukhilimu, iyiphi isilonda noma wacasuka ingxenye yomzimba uyovikelwa kusukela enqabayo nomthelela wendawo ezungezile kubantu ukuthi imfanelo enomthelela ukuqhubekisela phambili ukuphulukiswa. Ngaphezu kwalokho, sucralfate ebangela ukuba zonke izimiso amaseli ezilimele isikhumba ikhasi ngokuhamba kwesikhathi, kancane kancane indawo abasanda kuthola.
Benefit yamanzi ezishisayo kunzima inciphe, njengoba isizathu ke isisekelo yonke imikhiqizo lenkampani French. Kuyinto lokhu kakhulu ukuthi akekho umthombo ophilayo kwenza "Sikalfat" (ukhilimu) iphumelela kakhulu. amanzi Thermal kunomphumela omuhle esikhumbeni, ekusiza futhi iqhaza ekululameni ekuseni.
izinzuzo Incredible okuletha "Sikalfat" (ukhilimu), kanye ukusebenza yayo yenze lo mkhiqizo lwathandeka, ofanele hhayi kuphela isikhumba sowesifazane, kodwa futhi ngoba izingane, ngisho amadoda. Indlela isicelo silula:
Ukuze uqala edingekayo ukuze kahle ukuhlanza endaweni ezilimele.
Okulandelayo udinga ungamela ungqimba ukubeka ukhilimu esizeni ingqondo.
ukunyakaza Smooth kufanele ukusabalalisa ukhilimu kangangokuba ngokulinganayo walala phezu yonke indawo umonakalo.
Vumela isikhathi ukhilimu ugxile.
Inkambo ejwayelekile ukwelashwa ngalo muthi ihlala kungekho kwamasonto amabili, futhi phakathi naleso sikhathi zonke izakhiwo ezuzisayo eziqukethe "Sikalfat" (ukhilimu) ukuzivocavoca esiphezulu. Imiyalelo ukuthi iza izikhwebu, ugcizelela ukuthi isilonda kufanele aphathwe kabili ngosuku.
Kunezindlela eziningana okhilimu efanayo, kodwa abaningi babo bangabantu ohlangothini kakhulu futhi ziphansi isiFulentshi. I izindlela ethandwa kakhulu yilezi:
"Imoferaza" (ukhilimu), kodwa ngokuyinhloko igxile ukuphulukiswa izibazi.
"Topikrem" (ubisi) - yakhelwe ukuvikelwa kanye hydration kwesikhumba.
"Isikhumba-cap" (gel) - has elwa namagciwane kanye isithiyo izakhiwo.
"Bioderma" - has ezinye izici ezifanayo kanye "Sikalfatom" izinto, kodwa ihlose ulwe isikhumba esomile.
Lezi izindawo zomuthi. Ngo ingxenye yayo "Sikalfat" (ukhilimu), analogue zazo ukumboza ingasaphathwa izinkinga ungumholi ongenambangi.
"Trezel" ( "Avon"): incazelo kanye nokubuyekeza
Makeup ingubo oluluhlaza. Ngazo zonke izikhathi
Ihlobo izicathulo imfashini 2013: the licace - ngcono!
Inkampani Textile kwenza okunama-kilojoule amancane noodle ezihlahleni
Komzimba Izidakamizwa isici esiyingqayizivele
Medicine "Isitsha Ngenxa". Yokusetshenziswa
Ukulungiselela 'Enterofuril': imfundo